Cristiann Ronaldo Oo Lagu Yiri Iska Iloow Inaad kulaabato Man United | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Cristiann Ronaldo Oo Lagu Yiri Iska Iloow Inaad kulaabato Man United
kooxda Real Madrid ayaa u cadaysay xidigooda Cristiann Ronaldo inayna marnaba u ogolaan doonin inuu dib ugu laabto kooxdiisii hore ee Man united. Jamaahiirta Man united ayaa ku jira olole ay ku doonayaan in Ronaldo dib uGu soo laabto Old Trafford, waxayna kulankii xalay ee Villarreal iyo Real Madrid ku dul mareen diyaarad ay soo saareen boodh uu ku xardhan yahay Ronaldo dib uGu soo laabo gurigaaga.
Dhinaca kale Van Gaal ayaa todobaadkii hore cadeeyay inuu xiiso u hayo sidii uu Ronaldo dib ugu soo laaan lahaa balse Ancelotti ayaa isna todobaadkan cadeeyay in Ronaldo uu ku faraxsan yahay joogitaankiisa Real Madrid,wuxuuna cadeeyay inay samayn doonaan waxkasta oo ay ku ceshanayaan gool dhaliyahooda.
Ronaldo ayaa bishii September ee sanadkii hore Real Madrid u saxiixay heshiis shan sano ah kaas oo ku urursan doono 21 milyan oo yuro sanadkii. Ronaldo ayaa hore u cadeeyay inuu maalin uun dib uGu soo laaban doono Man united taas oo kicisay caadifada jamaahiirta Man United.
Dhibaatada hortaala in Ronaldo ku soo laabto Man United ayaa ah inaysan Real Madrid doonayn in mishiinkooda goolashu uu ka tago kooxda waxakale oo jirta inayna Man united ku jirin tartanka xiisaha leh ee Champions Leaque. Man United ayaa haddii ay xili ciyaareedka danbe us oo baxdo Champions Leaquega laba jibaari doonta rabitaankeeda Ronaldo.
Ronaldo ayaa isna ka hadlay aritna lagula xidhiidhinayo kooxdiisii hore ee Man United wuxuuna carabka ku adkeeyay in mustaqbalkiisu yaalo Real Madrid. Ronaldo ayaana xili ciyaareedka cusub ku bilawday qaab ciyaareed il qabad leh wuxuuna kooxdiisa ka caawiyay inay guulo muhiim ah ka gaadho horyaalka Spain iyo waliba Champions Leaque. Haddaba Akhriste ma umalaynaysaa in Ronaldo waqtiga dhaw ku soo laaban karo Man united